သက်သေရှိ၏ မရှိ၏………….(သက်သေမရှိရင်လွတ်မယ်တဲ့လား) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Myanma News » သက်သေရှိ၏ မရှိ၏………….(သက်သေမရှိရင်လွတ်မယ်တဲ့လား)
Posted by ကိုေပါက္(မႏၱေလး) on Jul 28, 2012 in Myanma News | 22 comments
သင်ဒီ အဖြစ်အပျက်များကို မနှစ်သက်လျင် Share ပါ)
ကောင်လေးနှစ်ယောက်ကို အကြောင်းမဲ့သက်သက် အုပ်စုဖွဲ့ပြီး အနိုင်ကျင့်လိုက်တဲ့အကြောင်းလေးရေးထားတာပါ။
အရိုက်ခံ ဓါးအထိုးခံလိုက်ရတဲ့ အောင်မင်းဦးရဲ့ ညီဖြစ်သူ ဖြိုးသီဟ ဖေစ်ဘုတ်မှာရေးတင်ထားတဲ့
ပိုစ်လေးကို TTNU ကပြန်ရှယ်ထားတာပါ။
ဒီပိုစ်လေးဖတ်အပြီးမှာတော့ ည ညတွေမှာ နံပါတ်ပါသော မပါသောဆိုင်ကယ်များနဲ့အုပ်စုဖွဲ့ကာ
လမ်းသလားနေသော လူငယ်တစ်စုကို ပြေးမြင်ယောင်မိပါတယ်။
တစ်ခါသားမှာတော့ ကျနော် ကန်တော်ကြီးပါတ်လမ်းအတိုင်း စမတ်ဂါးဒင်းမှအပြန်
လမ်းပေါ်မှာ ကန့်လန့်ခံနေတဲ့ ဆိုင်ကယ်အုပ်စုကို ဟွန်းသံပေးလို့ကျော်လိုက်ပါတယ်။
သူတို့အနားအရောက် မှာတော့ ပယ်ပယ်နယ်နယ်အဆဲခံလိုက်ရပါတယ်။
ကျနော်မိတ်ဆွေလင်မယားကတော့ ကျနော့်ထက်အဖြစ်ဆိုးပါတယ်။ဆိုင်ကယ်အုပ်စုတစ်စုက အော်ဟစ်ပြီး လမ်းပေါ်မှာ မြွေလိမ်မြွေကောက် မောင်းနေတာကို ကျော်တက်ချင်လို့ဟွန်းသံပေးလိုက်ပါတယ်။
အဲဒီအခါသူတို့ဆိုင်ကယ်ကို အဲဒီဆိုင်ကယ်အုပ်စက ဝိုင်းထားပြီး
အုပ်စုနဲ့နှစ်ယောက်ထဲလဲဖြစ် မူးပြဲကွဲနေတာကိုလဲတွေ့နေရတော့ မနည်းတောင်းပန်မှ
“နောက်တစ်ခါဒါမျုးိလုပ်ရင် အသေဘဲ”လို့ကြိမ်းမောင်းပြီး ထွက်သွားကြပါသတဲ့။
24-7-2012 နေ့မှာ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကဖုန်းဆက်လာပါတယ်။
20-7-2012နေ့က ဒါးထိုးခံလိုက်ရတဲ့ အောင်မင်းဦးဆိုတာကျနော်တို့
သူ့ညီလေးရေးထားတဲ့အတိုင်းပါဘဲ အလုပ်ကပြန်အလာ မသိမမြင်မတွေ့ဘူး
ရန်ညှိုးရန်စမရှိတဲ့ သူက အသွားလွတ်ဆော်တာကို ခံလိုက်ရတာပါ။
နာကျင်နေတာရယ် မျက်နှာထိမှာစိုးလို့ကွယ်ထားရတာရယ်ဆိုတော့ ဘယ်သူတွေ
ကကိုယ့်ကို ရိုက်နေကန်နေတယ်ဆိုတာတောင် မော့မကြည့်နိုင်ဆိုတော့ မမှတ်မိ။
အုပ်စုလိုက်ဝိုင်းပြီး ရိုက်နှက်ကန်ကျောက် ဒါးနဲ့ထိုးလုပ်သွားတာကိုခံလိုက်ရတာပါ။
ညအချိန်လူအသွားအလာပြတ်တော့လဲ ကူမယ့်သူမရှိ သက်သေမရှိ မြင်သူမရှိပေါ့။
အခုချိန်ထိ သူတို့အပေါ်ဘယ်သူကျူးလွန်သွားတယ်ဆိုတာ မသိသေး။
တကယ်လို့များ သက်သေမရှိလို့ ဘာဆက်လုပ်လို့မရဘူးလို့အရပ်ပြောစကားများမှန်ခဲ့ရင်
ခံလိုက်ရသူက ငွေကုန် အချိန်အလကားဖြစ် လူ့ကျန်းမာရေးပျက်စီးသွားတော့ လုပ်အားပျောက်ဆုံး။
ဒီကလေးတွေကိုလုပ်သွားတဲ့သူကို ဖမ်းမမိဘူးရင်တော့ အဲဒီသူက ဆက်မိုက်ဆက်ဆိုးလို့ရ
ဒီလိုုလုပ်သွားတိုင်းသာ မျက်မြင်သက်သေ မရှိတိုင်းသာ ဒီလိုကျူးလွန်သူက
“ ဒီလိုုလုပ်သွားတိုင်းသာ မျက်မြင်သက်သေ မရှိတိုင်းသာ ဒီလိုကျူးလွန်သူက
ဟုတ်ကဲ့… အဲဒါ အမှန်ပါဘဲ
တစ်ရက်တုန်းကပါ ၊ လွန်ခဲ့တဲ့ ငါးလလောက်က
နေ ့လည် ၁၂ နာရီခန် ့
ကျွန်တော်က ဆိုင်ကယ် တစ်စီးရယ်… ကျွန်တော့် မိတ်ဆွေတို ့လင်မယားက ဆိုင်ကယ်တစ်စီး စီရယ် နဲ့လမ်း၈ဝ အတိုင်း ၊ ၂၆လမ်းကနေ မြောက်ပြင်ဘက်ကို မောင်းခဲ့ကြပါတယ် ။
၂၄လမ်းနဲ ့၂၃လမ်းကြားလောက်မှာ ကျွန်တော်ဖုန်းလာတာနဲ ့၊ ကျွန်တော် ဆိုင်ကယ်လမ်းဘေးရပ်ပြီး ဖုန်းပြောနေတုန်း ၊ မိတ်ဆွေလင်မယားတို ့က ဖြေးဖြေးလေး ဆက်မောင်းသွားပါတယ် ။
အဲဒီမှာ… ချာတိတ်နှစ်ယောက် ဟာ 125တရုတ်ရုပ်ဆိုးဆိုင်ကယ် ကို ဗြဲလရမ်းမောင်းလာပြီး ၊ မိတ်ဆွေလင်မယား ဆိုင်ကယ်နားကပ်ကာ ၊ အနောက်က မိတ်ဆွေရဲ ့ဇနီး ကို လက်လှမ်းကိုင်ပါတယ် ။
ကျွန်တော့် မိတ်ဆွေခဗျာ ဒေါသ ဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲ… ကျွန်တော် ကိုယ်တိုင် အနောက်ကလှမ်းမြင်လိုက်ရချိန်မှာ ဒေါသအရမ်းဖြစ်ပြီး ၊ ဖုန်းချကာ ဆိုင်ကယ်ကို အမြန်မောင်းပြီး အဲ့နားကပ်လိုက်ပါတယ် ။ ကျွန်တော့် မိတ်ဆွေက သူ ့ဆိုင်ကယ်ကို မောင်းနေရင်းတန်းလန်းနဲ ့ဆိုင်ကယ်မှောက်ချင်လဲ မှောက် ဆိုတဲ့သဘောနဲ ့၊ ချာတိတ်နှစ်ယောက်ဆိုင်ကယ် က မောင်းနေတဲ့ ချာတိတ်ကို လှမ်းထိုးပါတယ် ။ ထိပါတယ် ။ အဲဒီမှာ သူရို ့၂ယောက်ကလဲ မခေ ၊ ဆိုင်ကယ်ကို ချက်ချင်းရပ်ပြီး ၊ ရန်ဖြစ်ဖို ့တာဆူပါတယ် ။ အဲဒီအချိန်မှာ သူရို ့ဘေးကို ကျွန်တော် ရောက်သွားပါပြီ ။ ကျွန်တော်တို ့၂ယောက်ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာ ကျွန်တော့် မိတ်ဆွေ က ထပ်ထိုးပါတယ် ။ ကျွန်တော်လဲ ဆိုင်ကယ်ရပ်ပြီး ဆင်းလဲဆင်းရော
အဲ့ခါကြ ချာတိတ်များဟာ ဆိုင်ကယ်ပေါ်ပြန်တက်ပြီးမောင်းပြေးပါတယ် ။ ကျွန်တော့်မိတ်ဆွေ က ဆိုင်ကယ်စီးဦးထုပ်နဲ ့လှမ်းထု ရာမှာ ၊ အနောက်က ထိုင်စီးတဲ့ ကောင်ရဲ ့ကျော ကို ပိတ်မှန်ပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် မရပ်တော့ပဲ မောင်းပြေးသွားပါတယ် ။
အဲဒီလို ချာတိတ်မျိုး ၊ အဲဒီလို လူမိုက်မျိုးတွေ မန်းတလေးမှာ အများကြီးပါဘဲ…
ညကြမှ ကြုံခဲ့ဖူးတဲ့ စည်းမဲ့ကမ်းမဲ့ ရမ်းနေတဲ့ ဖြစ်ပုံများကို
ဒီပို ့စ်မှာ ထပ်လာမန် ့ပါဦးမယ်
ညဘက်တွေ လှည့်ကင်းကို များများလေး ချထားသင့်တယ်နော..
ပြဿနာ ဖြစ်လေ့ရှိတဲ့ နေရာတွေ ပိုချထားပေါ့…
ဖြစ်ဖြစ်ချင်း မဖမ်းနိုင်ရင်တော့ မှတ်တမ်းတော့ တင်နိုင်အောင် လုပ်ထားသင့်တယ်..
နောက်မှ လူစုကွဲမှ ထပ်စုံးစမ်းပြီး တစ်ယောက်ချင်းစီ ဖမ်းသင့်တယ်..
ဒီကိစ္စ နယ်ထိန်းတွေမှာ တာဝန်မကင်းဘူး..
ကိုယ့်နယ်ထဲ ဘယ်သူဘယ်လိုဇ ရှိတယ်ဆိုတာ သိအောင် လုပ်ထားရမပေါ့..
ဥပဒေ မစိုးမိုးလို့ဒီလို ထင်တိုင်းကြဲနေကြတာပေါ့..
ကိုယ့်အရပ်ထဲ ဇရှိတဲ့လူတွေ၊ မသင်္ကာဖွယ် လူတွေ ရှိနေမယ်ဆို ပြည်သူတွေအနေနဲ ့လည်း တာဝန်သိစွာ သတင်းပေးကြဖို ့လဲ လိုပါဦးမယ်
ဒီလိုအဖြစ်တွေက တခြားနိုင်ငံကဗွဒီယိုတွေကြည့်ပြီး စိတ်ကူးယဉ်ပြီး ဖင်ယားပြီး လျှောက်လုပ်ကြတာထင်ပါတယ်
မှတ်လောက်သားလောက်အောင် ဖမ်းဆီး အရေးယူနိုင်ဖို ့…..ဘယ်လိုကြိုးစားကြမလဲ….
မန်းတလေး မှာ ဘယ် လို တွေ ဖြစ် နေ ပါလိမ့် နော် ၊ ကြား ရတာ မသက်သာလိုက် တာ။ သေချာ စီမံချက် ချ ပြီး ထိထိရာက်ရောက် နှိမ်နင်းမယ်ဆို ရင်မရ စရာ အကြောင်း မရှိ လောက်ဘူး။ ဒါပေမယ့် ပတ်သက်ရာ ပတ်သက် ကြောင်း တွေ၊ ဘောစိ ပေါက်ဖော် ကြီးတွေ ၊ ရဲ့ သားတွေ၊ မြေးတွေ ပါနေရင်တော့ မပြောတတ်ဘူး။ အရင် တုန်းက ရန် ကုန်မှာ စကော် ပီ ယံ ဂိုဏ်း သောင်း ကျန်း ခဲ့ တုန်း ကလို ဖြစ် နေ ပြီ ထင်ပါရဲ့။
အခု မန်းလေးမှာက ဗျောက်သောက် ဟိုတစ်ဖွဲ့ ဒီတစ်ဖွဲ့နဲ့ ဦးတဲ့ကောင်တွယ်နေကြတာ
ခံရတဲ့ကာယကံရှင်တွေက.. မီဒီယာကိုဖွင့်ပြော.. ဆုငွေထုတ်တာပါ…
အဲဒီနည်း.. မြန်မာတွေလည်း.. အဆင်ပြေသလို.. ညှိပြီးသုံးစေချင်ကြောင်း..
မြန်မာတွေက တော်တော့တန်တန် သတင်းပေးဖို့ကြောက်တယ်ထင်တယ်သဂျီးရယ်
ရှေးလူကြီးများဆိုရင် ရုံးရောက်ဂတ်ရောက်လည်း အင်မတန်ကြောက်ကြတယ်လေ
ပြီးတော့ အဲ့လိုကိစ္စတွေမှာ ကိုယ်နဲ့မဆိုင်ရင်သိပ်မပါရဲတာလည်းများတယ်
အဲ့လာ သဂျီးပြောတဲ့ ကျိန်စာမိလို့ထင်တယ် အဟီးးးးးးးးးးး
သူ့အပိုင်နဲ့သူ ရဲတွေရှိနေရဲ့နဲ့ ဒီလိုအမှု့မျိုးသဲလွန်စတောင်မရဘူးဆိုတော့
တချိန်တုန်းက ဘယ်ကောင်နိုင်ငံရေးလုပ်လဲ ဆိုတာကျတော့
သိနိုင်တဲ့ရဲတွေ ဒီလိုအမှု့မျိုးမသိဘူးဆိုတာကတော့ တနေရာမှာလွဲနေတာဖြစ်ရမယ်…
ရဲတွေကို ပေးကမ်းပြီး ဆိုးနေတဲ့လူငယ်တွေများရှိနေလား ?…
ဒါမှမဟုတ် အာဏာပိုင်လူကြီးသားသမီးတွေပါတဲ့ ဆိုးသွမ်းတဲ့လူငယ်တွေများလား?….
This is so bat.
ဒါမျိုးကို ရဲဝန်ထမ်းတွေ စောင့်ကြည့်ပြီး ထောင်ဖမ်းသင့်တယ် ထင်တယ်။ ဒီလိုသာ တကယ်ဖြစ်နေတယ် ဆိုရင် မန်းမှာ နေတဲ့ လူတွေ ညဘက် အပြင်ထွက်ရင်တောင် မအေးချမ်းတော့ သလို ခံစားရတာကိုက လုံးဝ မသင့်တော်ဘူး။
ဖမ်းမိတဲ့ ကောင်တွေ နောက်မလုပ်ရဲအောင် မရမ်းကားရဲအောင် စင်္ကာပူလို ကြိမ်ဒဏ် ၂ချက်လောက် ချ ပလိုက်.. တချက် ကို ၁လ ကု ရတယ်လို့ ကြားဖူးတယ်။
အရိုက်ခံပြီးရင်တော့ ဆိုင်ကယ်ခုံမှာ တောယုံ မထိုင်နိုင် ဖြစ်သွား အေးရော..
မောင်ပေလည်း အတူတူသတိပေးချင်ပါတယ်။ ညမိုးမချုပ်ပါစေနှင့်။
ဟိုတုန်းက ဂြိုဟ်ကိုးလုံး ဂိုးဏ်နဲ့
ကိုပေ ဇ ရှိမှန်း နော်သိပါတယ်..ဟိဟိ…..
မိရင် တကိုယ်လုံးဓါတ်ပုံရိုက်ပြီး သတင်းစာဂျာနယ်ထဲထည့်-
ဆိုင်ကယ်ကိုသိမ်းပြီး အမြင့်ဆုံးအပြစ်ဒါဏ်ချပြီး စစ်တွေထောင်ကိုပို့-
ဖြစ်တဲ့မြိ ု့နယ်က မြိ ု့နယ်မှူး စခန်မှူး နယ်ထိန်းတွေ
တပတ်အတွင်း မမိရင် ကယားတို့ချင်း တို့ပို ့လိုက်မယ်သာပြော
အရင်ကလဲ ဒါမျိ ုး ဖြစ်ဘူးမှာ
မီဒီယာမှာ မပါတော့ လူမသိဘူး ဆိုင်ရာက အေးဆေးလုပ်နေတယ်
အခုလို မီဒီယာ မှာ များများ ပါတာ
မမိရင် ထပ်ဖြစ်ရင် ထပ်အော်ပါ
တလောက ၁ဝ ယောက် ၊ အခု ၂ ယောက် မတွေးတော့ဘူး ထမင်းဝဖို့အလုပ်လုပ်ရအုံးမယ်…နဝတ ကိုပြန်တမ်းတရအောင်များ ဖန်တီးနေကြသလားဗျာ ၊ (ရမ်းစွက်ဆွဲသွားခြင်းသာ)
သက်သေမရှိပဲ ဖမ်းလို့၊ စီရင်ချက်ချလို့ရတဲ့နည်း သင်ပေးစမ်းပါ၊
(သက်သေမရှိပဲ ဖမ်းလို့၊ စီရင်ချက်ချလို့ရတဲ့နည်း သင်ပေးစမ်းပါ၊
မဟုတ်တဲ့သူတွေကို လက်ညှိုးမထိုးနိုင်အောင်၊) ဆိုပြီးခင်ဗျားပေးထားတဲ့ကော်မင်းဖတ်ကြည့်ရင်
ဒါပေမယ့်လက်တွေ့မှာ ရေဆုံးရေဖျားလိုက်မယ်ဆိုရင် ပေါ်နိုင်တဲ့အမူ့ဖြစ်ပေမယ့်
သက်သေမရှိဘူးဆိုပြီး လမ်းတစ်ဝက်မှာတင် ရပ်နေတဲ့အမူ့တွေများလာမှာစိုးလို့ဒီပိုစ်ကိုတင်ပေးလိုက်တာပါ။
နောက်ခံလိုက်ရတဲ့သူတွေကလည်း မျက်မြင်သက်သေမှမရှိတာကွာ အလကားပါဘဲဆိုပြီး
ထုံးစံအတိုင်း နယ်ခံရဲတွေ လာဘ်စားမှုအကြီးကြီး လုပ်နေကြပြီထင်တယ်။ အဲလိုမှမဟုတ်ရင် မန်းလေးတိုင်းရဲ့လုံခြုံရေးပိုင်းဆိုင်ရာမှာ အမြင့်ဆုံးအုပ်ချုပ်သူထဲက ခွင့်ပြုနေလို့ (သို့) မသိချင်ယောင်ဆောင်ပေးနေလို့ဖြစ်ရမယ်။ မန်းလေးမှာ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် တရုတ်တွေ၊ ရှမ်းတွေ၊(ဗမာနဲ့ အခြားတိုင်းရင်းသား အနဲငယ်)ကလဲ ပေါမှပေါဆိုတော့ ငွေပေးပြီးမိုက်နိုင်သူတွေ မည်သူမဆိုလုပ်ချင်တာ လုပ်ခွင့်ရှိကြသည်ပေါ့။ ဟူး မလွယ်ပါလား။
KTV မှာ. ဟစ်လို့နေ
တို့ မေမေ မခင်မြ
မန်းတလေးမှာအဲလိုလား ့ကျန်းမာပါစေ. ့ချမ်းသာပါစေ. ့ဘေးရန်ခပ်သိမ်းငြိမ်းပါစေ
မန်းလေးမှာ ထင်သာမြင်သာရှိအောင် ရေးလိုက်တာပါ။